ZVAKAITWA: Ungawana sei iwo ma tokeni anogadzira X100 zvisati zvanyanyisa? - Cazoo
ZVAKAITWA: Ungawana sei iwo ma tokeni anogadzira X100 zvisati zvanyanyisa?
musha » musha » ZVAKAITWA: Ungawana sei iwo ma tokeni anogadzira X100 zvisati zvanyanyisa?
Tag: Binance Research, BSCAN, keke, mapepa, KUSVIRA, ETHERSCAN, GitHub, ICO, Icodrops, mvumo nzira, Medium.com, Messari, Mikangano Yema Smart, staking, Chiratidzo, tokenomics, X100, Youtube
Nguva yekuverenga: 11 minuti
Kana zvasvika kune cryptocurrency panogona kunge pasina chinhu chakakosha kupfuura "Tsvaga zvako wega".
Ita Zvako Ongororo, taura vatauri veChirungu. KUSVIRA.
Kune ruzivo rwakawanda kunze uko uye zvinogona kuve zvakaoma kuti unzwisise izvo zviripo uye zvine mukana, izvo zviripo uye hazvina hunyanzvi hwakawanda, kana chii chiripo chingomirira kuti ubvise iwe. Nekudaro, kana iwe uchinyatsoda kuzvipira, unofanirwa kudzidza maitiro ekutsvagisa kwako - ngatione kuti unoona sei kana iri crypto yekugara kure kana kuti ingangoda kubatirirwa.
Kana ino inguva yako yekutanga kuverenga mapeji aya, unogamuchirwa, kana kugamuchirwa. Pano tinonyorera kuCazoo, naCazoo, kufadza idzi dzakaoma zvemari, zvemagariro uye pamusoro pezvinhu zvese zvehunyanzvi mupfungwa. Ndiyo notepad yandinoda uye yandinogovana newe, uye ndinofara kana ikagona kubatsira kwauri. Chokwadi, kana rimwe zuva ukanyorera kuBinance wadii kuzviita na kodhi yangu yekuendesa? Isu tese tinowana mukana, zvese 20% dhisikaundi pamakomisheni. Kuregererei!
Asi ini handisi chipangamazano wezvemari. Ini handikupi zano iwe kuti uwane mari yako sei. Ini handibatsire chero munhu kushandisa ino inoshamisa network ye blockchains uye dapps. Kuisa mari yako uye uchiita kuti ubereke michero zviroto zvevanhu vese, uye kana ikava nzira yaunoda kutora, iro chete zano randinopa ndere kuzviita nekungwarira kwakanyanya.
Semazuva ese, Index inotevera pazasi, kuti ugone kusvetukira kuchikamu chaunonyanya kufarira. Zvisinei, ndinokuraira kuti uverenge zvese.
Chekutanga Chikamu: Musika chiitiko
Chikamu chechipiri: Ongororo yekutanga
Chikamu chechitatu: Tsvagurudza Masosi
Nhanho 4: Tarisa cheki: kaviri cheki
Chikamu chechishanu: Nhau uye iyo RoadMap
Nhanho yekutanga mukutangisa kutsvagurudza pane yakanakisa mari yemari X100 ichaitwa mumasvondo maviri kuzvibvunza kuti: mari iyi inoshanda mune zvehupfumi? Ndakaona akawanda anovimbisa mapurojekiti e cryptocurrency, kungozoona kuti mari iri kushanda sei mumusika uye… yanga yafa kwemwedzi kana makore.
Enda kune saiti senge coinmarketcap.com kana coingeko.com kuti uone kana iri mari mhenyu, kana paine chero chiitiko, kutengeserana kunoitwa nayo, ive shuwa yekutarisa vhoriyamu yekutengesa uye kuti mutengo uri kufamba sei.
Kwete chiratidzo icho chete chinofanira kuverengerwa mukati meShanduko ine mukurumbira wakanaka, asi huwandu hwekutengesa mumusika iwoyo hunofanirawo kunge hwakanyanya, ndingati zvakakosha: dai zvisiri izvo, unogona kuzviwana uchibhadhara 'premium sarudzo kubvira iyo odha bhuku ivo havana kutenderera kukwana zvakakwana.
Kana iyo chiratidzo chauri kutarira chiri chiratidzo cheERC20 protocol, iyo inotengeswa irinani chete paDEX senge Uniswap, ita shuwa yekuenderera nekungwarira, sezvo maDEX asina nzira dzepamusoro dzemitengo kana zvinodiwa. Zvese izvi hachisi CHIKOSI chekusiya chirongwa kunze, asi icho chinhu chekuchengetedza mupfungwa paunenge uchifambira mberi.
Mutengo wakakosha, asi handizvo chete. Ngatifungei kuti iyo cryptocurrency yawasarudza ine zviri pamutemo kusimudzira kwehupfumi. Yenguva yekuwana zano rekuti chii uye kuti rinoshanda sei.
Youtube zvirokwazvo inzvimbo yakanaka yekutanga. Asi kune mhirizhonga yakawanda. Ndicho chikonzero zano rangu nderekuti uchinje Messari, Binance Research, uye kubva kuICO yekutarisa saiti senge Icodrops. Ita senge uri kudzokera kuchikoro: Paunenge uchishandisa zviwanikwa iva nechokwadi chekutora zvinyorwa uye nyora pasi chero mibvunzo yaungave unayo. Iye zvino hauchazozvida, haugone kuwana mhinduro. Asi ikozvino hausi kuyedza kuwana mhinduro idzodzo asi urikutanga rwendo.
Messari: CAKE chiratidzo chiratidzo
Messari chishandiso chine simba iyo iwe yaunogona kushandisa kuongorora cryptocurrencies. Chikamu icho chandinofunga kuti iwe unofanirwa kufarira ndecheicho cheiyo crypto mbiri iwe yaunofarira. Mesari vakomana vanoita ongororo yakazara inosanganisira nhoroondo ye cryptocurrency, zviratidzo, uye kugoverwa kwematokeni. Vanosvika padanho risinganzwisisike uye kunyange nhanho yekuvandudza kwekare uye kutsvaga mari pamwe nemepu yeramangwana reprojekti.
Nyora pasi mazita evose vakakosha vanhu vane chekuita muchirongwa ichi, kureva iye muvambi uye CEO (uchifunga kuti havazi ivo vamwe vanhu) .. uchavada gare gare.
Tsvagiridzo yakaitwa naBinance pachinzvimbo ivo vanotora nzira yehunyanzvi yekuongorora chero chiratidzo. Izvo zvinonyanya kubatsira kuve nekutsvagisa nekucheka uku, kuti unzwisise zvinhu zvikuru zve crypto uye mashandiro ayo.
Chinhu chikuru pamusoro pekutsvaga kwakagadzirwa naMessari naBinance ndechekuti nekuti ivo nyeredzi dzeHollywood munzvimbo ye crypto, hunyanzvi hwepamusoro hwehunyanzvi hunotarisirwa kwavari. Ivo havangori mombe dzakakora: ruzivo rweMessari neBinance harusati rwuri rwechizvino-zvino. Iwe haugone kuvapa mhosva: vari kuita zvakati wandei… asi zvakaringana futi. Yatove mbama yekutanga iri kukuudza iwe: usatora chero chinhu chakanyorwa nechetatu segoridhe chairo, sechikonzero chekumisa kutsvagurudza kwako kwese, kunyangwe kana sosi iyoyo ichinyatso kuzivikanwa
ICO nzvimbo dzekutsvaga, senge Icodrops, iri mhando yenguva muchina: kune imwe crypto ivo vaita kuti iwanikwe mifananidzo yekare uye zvinyorwa izvo zvisingachawanikwe pawebhusaiti. Saka zviri nyore kuona kana chirongwa che cryptocurrency chachinja mafambiro acho, kana kana chiri kungoedza kuviga zvakapfuura. Nehurombo huwandu hwakazara hwemari yakakwidzwa iyo inonzi neIcodrops uye saiti dzakafanana hadzisi dzakarurama nguva dzose, uye zvinowanzo sanganisira mari dzese dzakakwidziridzwa zvese muzvikamu zvakavanzika zvemari uye kuburikidza neakawanda maICO. Rangarira kugara uchitsvaga mifananidzo kana machati kwaunogona kuona zvakajeka kuputsika kwechiratidzo, kuti mari yakaunganidzwa sei uye kupi kwakapihwa matokeni.
Messari anoita basa rakanaka rekutevera tokeni mari uye kugoverwa - iwe unogona kuyambuka ruzivo urwu neIcodrops kuti ujekese kuti chirongwa chakapihwa chekrispto chakawedzera sei guta rayo. Izvo iwe zvauri kutsvaga pano ndeye chiratidzo chechipo hachiite kuti iwe ude kutiza .. kunyanya iwe unoda kuona kuti mazhinji emamwe matokeni akapihwa kana achapihwa ari mumaoko enharaunda kwete muhomwe dzevanhu vakatanga chirongwa! Vabati vezvikwangwani zvakawanda vanogona kutengesa kana mutengo watanga kukwira, izvo zvaizodzivirira mari yacho kukura mukukosha kwomuviri.
Sapakutanga, hazvisi zvekuti kana mamiriro aya akadonha, chirongwa chose chirongwa chinofanira kuraswa. Asi iwe unofanirwa kuve wakanyatso chenjera kana iwe ukaona mufananidzo wakadai, kutarisa zviratidzo zvekristpto paBinance Research kana Messari:
SOL Token Regedza Chirongwa
Zvino zvawaongorora zvese, inguva yekudzokera kuYouTube. Sezvo iwe uchivimba iyo crypto, ikozvino zvaunenge uchinyatso nzwisisa nezvayo, ngatinzwe zvinotaurwa nevaya vakaigadzira. Tora mazita awakarangarira kunyora, iwo mazita evakakosha vanhu vanobatanidzwa muchirongwa. Basa rako rinotevera ndere kutsvaga mabvunzurudzo achangobva kuitwa avakaita. Ronga ivo maererano nenguva uye tarisa vakawanda sezvaunogona!
Kuona kutenda: Kutarisa kubvunzurudzwa nenhengo dzakakosha dzeiyo crypto chirongwa chaunotevera chinopa dura repfuma yeruzivo iwe yausingazowane kumwe kunhu. Zvakare, idzi bvunzurudzo dzinowanzo kundibatsira zvakanyanya kuti ndinzwisise zvigadzirwa zvehunyanzvi zvechirongwa icho chandingave neyakaoma nguva kunzwisisa nekungoverenga zvinyorwa, zvinowanzo kuwanika pane iyo crypto saiti. Paunenge uripo, tarisa LinkedIn profiles kuti uone kana vaine hunhu hwakanaka. Kana vakashanda muGoogle kana Microsoft zvakanaka here? Ehe, kana kuhaya hakuna kugara kwemwedzi mishoma. Kana ivo vakadzingwa nekuti vaichera crypto, saka gimme shanu! Tsvaga iyo Youtube chiteshi cheiyo crypto mari iwe yauri kufarira! Kana iwe uri nyanzvi yekutsvagisa, iwe unowana mapfupi mavhidhiyo achitsanangura izvo zvakakosha zvikamu zveiyo purojekiti.
Izvi zvinowedzera mamwe matanho maviri kutsvagiridzo: Chokwadi cheki, nguva dzose, zvese zvawakadzidza kusvika parizvino, uye edza kunzwisisa zviri muchitoro mune ramangwana reiyi cryptocurrency.
Nhanho 4: Tarisa cheki: chengetedza kaviri
Wakatove uri kune webhusaiti ye crypto kuti utundiswe nematani eruzivo? Iwe unongoda kuverenga peji repamba uye chikamu cheruzivo. Ruzhinji rweruzivo nezve yakanyanya crypto saiti inowanzove iri boka re trivia. Zviripachena, mabhangi uye asiri-emabhengi transaction kana chimwe chakanakisa chikonzero chavanoti vanotsigira. Zvizhinji zvemukati zvirimo hazvibatsiri uye hazvizobatsire mukuziva kana chirongwa ichi chakakodzera kutariswa kwako. Chikurukuru, iwe uri panjodzi yekuparadza nguva yakawanda uchitsvaga saiti yavo kana iwe usingazive zvauri kutsvaga. Asi kubva pakurangarira kunyora pasi mazita ezvinhu zvakakosha zvechirongwa ichi uye iwe ukanyora pasi mibvunzo yese yaunoda mhinduro ... saka inguva yekuona kuti zvese zvawakadzidza zvichiri kushanda uye zvinogadzirisa mibvunzo yako yavanayo kwakamuka kubva pawakatanga kutsvagurudza kwako.
Pancakeswap Rugwaro: docs.pancakeswap.finance
Unogona kuwana akawanda emhinduro nekuchera muchikamu chakatsaurwa kuZvinyorwa .. pamwe une rombo rakanaka uyezve kune yekutsvaga bar uye iwe unogona kuisa mazwi akadai tokenomics, inflation, ICO, mvumo nzira, kuchera, staking uye chero imwe nyaya kwaunoda kuti uwane kujekeswa. Iko hakuna kutsvaga? Tsvaga neruoko.
Usatye kana iwe usinganzwisise chero chinhu ipapo ipapo - crypto zvinyorwa zvinowanzo gadziriso-inotungamirwa. Mazhinji emapeji acho ane mitsara yekodhi. Kanganwa kodhi, verenga zvakanyorwa pamberi nepashure. Kazhinji kodhi yakanyorwa inotakurika zvakanyanya.
Rimwe gwaro rekutsvaga pane crypto saiti ndiyo iyo chena bepa: tsvaga chikamu chine chekuita ne tokenomics. Tarisa a blockchain explorator yeiyo crypto. Icho iE ERC20 Token here? Wobva waenda kuEtherscan. Zviri BEP20 here? Enda kuBscscan.
Vabati vechiratidzo che $ CAKE
Pano iwe unogona kukurumidza kutarisa kuti ndevapi vabati vechikuru chimwe chiratidzo, iwe unogona kutombochiona mune chie pie!
Isu tatozvitaura: chenjera kana paine zvikwama zvinobata 90% yematokeni anotenderera. Asi hazvisi izvo zvinogara zvakadaro: zvinowanzoitika kuti chikwama chaunoona pamusoro pechinyorwa, icho chinobata ruzhinji rwechiratidzo, Chibvumirano cheSmart, icho chinoshandiswa pazvinhu zvakaita staking.
Kana yako crypto isiri chiratidzo cheE ERC20, tinovimba yavo blockchain yekutsvagisa ichakubvumidza iwe kuti uone rakazara runyorwa rwekuti ndiani akabata chiratidzo. Havadaro here? REDI REDU.
Zvino zvawaita tsvagiridzo huru pane iyo crypto iwe yaunoda kuisa mari mairi, pane chimwe chete chimwe chinhu chisipo: kutsvaga zvakakosha zvekuvandudzwa kweprojekiti, kunyangwe vari kuuya, vakaronga, kana vakatotora nzvimbo.
Kune chikamu chekupedzisira chekutsvaga kwako kwe crypto iwe uchazoda zvinhu zvitatu: chimwe chete Mugwagwa, UN Blog uye nhau dzichangoburwa .. Ini ndinokurudzira, nenzira iyi: kazhinji nhau ipfupiso yezvavanonyora mublog.
Pancakeswap blog uye nhau
Tora mukana wenhau dzaunoverenga mune kunyangwe zvidiki zvinyorwa: vanogona kuuya zvinobatsira kana iyo blog positi yavanoreva yakarebesa kana kuomarara kugaya.
Ngatitaurei zvino nezve RoadMap.
Mune ruzivo rwangu, cryptocurrency RoadMaps inowanzo kuve isina kujeka uye isingape ruzivo rwatiri kutsvaga. Kuona kubvunzurudzwa nevatangi uye maECOs kunopa ruzivo rwakanyanya kune ramangwana rerojekiti yavo kupfuura iyo RoadMap. Mune yakanaka crypto, iwe unowana yakanaka mepu ine mepachokwadi zvinangwa, izvo zvinogona kuzadzikiswa chirongwa chisati chapera kunze kwemari kana kuparadzwa nemakwikwi Ukasawana chero RoadMap uye kana mabvunzurudzo awakatarisa asingakupe pfungwa yekuti chirongwa ichi chichagara kwenguva refu… pamwe urikutarisa mari isiriyo.
Ramangwana harisi iro rese rinokosha: tsvaga kana vawana zvavakavimbisa kuita kusvika nhasi .. uye pano panouya blog.
Kana iwe uchinetseka kuwana blog pawebhusaiti ye crypto, mikana iwe uchaiwana pane yavo nzira. Dzimwe nguva iwe uchafanirwa kuenda uye kutarisa yavo gitHub kuti uone kufambira mberi kwavo .. kubva ipapo unogona kunyatso kuzvibvunza kana chirongwa chiri kufambira mberi munzira yaunoda.
Kutsvaga kuburikidza nemablog blog misoro yeiyo crypto projekiti ingori yakaringana kuwana zano rekuti yaive yechokwadi kushoko rayo uye negwara rairi kunanga. Zvakanaka kuenda ipapo wobva wanyatsoverenga icho chose chinyorwa kana iyo yekudzokorora ichitaura nezve zvakakosha kugadziridzwa senge izvo zvine chekuita neshanduko mune chiratidzo kana chero chiziviso chinotaura nezve hombe Kubatana.
Sekupedzisira sarudzo, vhura tebhu nyowani uye uvhure mamwe masayiti enhau e cryptocurrency akadai seCointelegraph, Coindesk kana Decrypt uye edza kutsvaga misoro yakatsaurwa kuchirongwa chauri kutsvaga. Hausi kuwana chero chinhu? Icho hachisi chaicho chiratidzo chakashata kana ichienzaniswa neyechinyakare midhiya, crypto media inoita zvinhu nenzira yavo vega, uye havawanzo kuda kutaurira misoro mikuru pamusoro pezvakakosha zvinhu zvinoitika.
Panguva ino iwe unofanirwa kuve neruzivo rwese rwaunoda kuti utonge zvakanaka kuti cryptocurrency ine kukosha chaiko uye yakasungirwa nechirongwa chiri pamutemo. Kana iwe usina kutonga kwakanaka kwazviri, pamwe uri kubata neprojekiti yekutarisira, kana kutombogara kure nayo. Zvakaipa kufunga nezvazvo, asi zvinogona zvakare kureva kuti uchafanirwa kudzokera kumashure, dzokera kubhodhi rekudhirowa, uye tarisa zviwanikwa zvawakashandisa mukutsvaga kwako.
Kutsvagisa crypto ibasa rakawanda. Asi zvibvunze pachako: maawa mashoma ekutsvagisa akakosha kune iyo 100x kudzoka pane yako mari? … ..… ..… ..
Asi Cazoo! Iwe unofarira Cazoo, unoita sei yako crypto research?
Tsvaga zvakanaka yeCazoo
Primo: Ndinoenda kuconmarkmarketcap kana coingecko kuti ndione kana chiratidzo chiri kushambadzira, zvirinani pane kuchinjana kwakavimbika. Mari yakafa here kana kuti kufa? Handitambisi nguva.
maererano: Ini ndinoenda kuYouTube ndonoona zvakataurwa nevamwe vanhu nezve chirongwa ichi, uye ndinyore zvishoma kana zvichikosha.
Chetatu: tarisa ongororo yeMessari neBinance, kuti uwane yakajeka zano rekuti chii uye chii chirongwa uye kuti chinoshanda sei. Ini ndinoramba ndichitora zvinyorwa, uye ini zvakare ndinotanga kunyora pasi mibvunzo mishoma uye mazita evatangi.
Chechina: tarisa Icodrops kuti uone kuti imarii yakakwenenzverwa neiyo purojekiti uye kuti ma tokeni akapihwa sei. Ini ndinoshandisa masosi anoratidza pamwechete naMessari kuti nditarise kaviri kuti ruzivo rwakanyorwa nderechokwadi.
Cheshanu: Ini ndinodzokera kuYouTube ndotarisa kubvunzurudzwa kwese kwandinogona, pakati peazvino kwazvo, kwakaitwa nemukuru kana muvambi weprojekiti. Kazhinji kazhinji zvavanotaura zvinopindura yakawanda yemibvunzo yandakanyora mudanho repiri: ivo zvakare vanowanzo kujekesa zvinhu zvakawanda zvandaifunga kuti zvaivhiringidza nezve tekinoroji yakashandiswa. Ndiri kutsvagawo Youtube chiteshi cheiyo crypto, uye kana iripo inowanzo kupa ruzivo uye dzimwe tsananguro. Kufunga kuti zvese zvandakawana hazvina kuderedza kushingaira kwangu,
Chetanhatu: chera muzvinyorwa zveprojekti. Ini ndinotarisa chero humwe huwedzero kune tekinoroji inoshandiswa neiyo crypto, nzira dzekubvumirana, zviratidzo, staking mibairo, zvinodiwa zvemigodhi, uye chero zvimwe zvakakosha zvinhu zvandakadzidza kusvika parizvino.
Chenomwe: Ini ndinopepeta yavo RoadMap uye blog kuti ndione kana vaita kufambira mberi kwavakavimbisa uye kana vachigona kuvaka nekuendesa chero chavanoda kufambisa chirongwa chavo kumberi.
Chesere: tarisa kana bhizinesi ravo rakaita misoro muecrypto nzvimbo ine misoro mikuru uye inonakidza mumakomputa makuru e crypto. Kana pasina makuru makuru, chenjera! Pamwe tiri panguva yakaoma yeprojekti, uye takasvika pamberi pevamwe.
Iri zano rangu rekuita zvinobudirira kutsvagisa mari yedhijitari harisi iro risingapindike. Asi kwandiri ndeyakakwana musanganiswa wekutarisa, kuverenga uye kudzokorora.
Zviri nyore kukanganwa kuti nyika yemakristpto mariiri iri nyowani munda, zvakanyanya muchiri mucheche. Nekudaro, kana iwe ukadzidza kuita zvakanaka pakuita yako crypto-research izvozvi uchave mumwe wevashoma vanhu vanoziva chaizvo zviri kuitika kana FOMO yarova musika wekutengesa ... sezvazvakaitika nguva pfupi yadarika, Kubvumbi 22, 2021, mushure memashoko kubva kuMutungamiri Biden.
Nyaya inoteveraChii chinonzi Flippening mupasi reCryptocurrencies?